Umlingisi uRimma Markov ungabizwa njengomculi wezwe ngempela. Futhi akusiyo ngenani lamabhayisikobho ayenenkanyezi kuye (futhi inombolo yabo isondela kukhulu), kodwa ekhono lakhe lokuba liqotho futhi lingavumelani kokubili ubuciko nokuphila.
URimma Markova - Umculi wabantu base-USSR waqala ukuvela ngemva kweminyaka engamashumi amathathu kuphela, owathola kuqala udumo emva kweminyaka engamashumi amane, kodwa uthando lomnakekeli nokunakekelwa kwakhe kwadlula ngokushesha - ngoba lokho okunengqondo nokukholisa okunjalo kwakungenakuqaphela. Sihlangane nomdlali we-actress kusihlwa sejubili yakhe. Ifoni idwenguliwe kusuka kumakholi weqembu le-TV ezama ukuvumelanisa ngokushesha ngokuqopha, futhi wabuye wachaza ngesineke ukuthi isimiso sakhe senziwe ngezinsuku eziningi ngaphambi futhi kwakungekho isikhathi samahhala lapho.
U-Rima Vasilievna, yimiphi imizwa onayo mayelana nonyaka ozayo? Akekho ozongikholelwa. Ngineminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nanhlanu. Futhi angikaze ngilungiselele ijubili, ngoba bonke baqamba amanga njengezinja amahora amathathu. Ngivela kulokhu. Futhi ngiphupha - kungase kube ngokushesha, ngoba ngivame ukubizwa futhi ngibuhlungu. Zonke iziteshi, wonke amaphephandaba, wonke omagazini ... Ngiyagula ngokwami ​​kakade. Ngingedwa yedwa enganginguye - nakuzo "Izindaba zebesifazane", naku "Life Line", futhi ngitshela konke, ngithi, ngitshela. Yebo, kungakanani ongakwenza! Ngiyazi konke mayelana nami: uhlobo luni lomuntu engingubani, uhlobo luni lomngane, yimuphi umculi. Futhi angijabuli ngami ngokwami, ngendalo yami yobuciko. Uyakuqonda - akuvamile ukuthi kwenzeke, kodwa ngiziqhenya kakhulu! Okumbi kunokuba ngicabange ngami, akekho ocabanga. Enkumbulweni, akuyona imnyama kakhulu, kodwa izinkumbulo ezikhanyayo zivame kakhulu. Imiphi imizwa ecacile kakhulu yenjabulo empilweni yakho? Yebo, iyiphi injabulo? Impi ivuliwe. Ukuphila kuyinselele, ngicabanga kanjalo. Omunye wathi ngokuqondile - umzabalazo wokuphila. Futhi kukhona abantu abafa, kukhona labo abalwa. Ngiyisosha, ngilwa. Yilokho konke. Kodwa emva kwakho konke, ngaphezu kokulwa empilweni kukhona uthando. Futhi wayenakho, futhi ... Ngiyaphikisana lapho indoda endala iqala ukukhuluma ngayo. I-sali isivele igeleza kusukela ekugugeni, abantu babukele futhi bathi: "UNkulunkulu wami, isithombe, futhi usho okunye ngothando." Yebo, ngithandana, futhi ngithandana nami. Futhi azishintshe, hhayi mina, kodwa mina. Futhi ngathandana nokuzidela. Ngangithanda amadoda amaningi, futhi lapho ngithandana, kwakungokoqobo njalo. Kwabe sekungeke kwenzeke ukuthi ezinye izimo zenzeke, azizange zenzeke. Futhi mina, eqinisweni, ngahlupheka, ngoba lapho uthanda umuntu - uyibhala. Futhi uyibheka ngeminwe yakho. Uyakholelwa ekupheleni kwesiphetho?
Yebo. Umama wangitshela ukuthi lapho bebancane,-ke, njengabantu bonke kule minyaka, baqagela. Futhi watshelwa: "Izingane zakho zizohamba endleleni egcwele izimbali." Futhi wayengenakuqonda ukuthi kusho ukuthini, lokho okushoyo. Kodwa ngihlale ngizungezwe izimbali nezimbali. Njengoba bethi: "Kwaphela isikhathi eside angizange ngilale eHholo Lamakholomu." Nginezimbali yonke indawo, futhi zihlale zikhona eziningi. Ngivele ngithi: "Ungangithengi nanoma iyiphi i-shit yosuku lwami lokuzalwa. Awudingi noma yiziphi izimbali, ungayichitheli, ngoba ngiyabasabalalisa. Futhi ungathengi isikebhe noma ibhokisi. Angazi ukuthi kufanele ngihambephi kubo. " Nginezikhwama zalesi shit. Noma unikeza, kodwa thola ngaphambi kwalokho okudingayo. I-Pantyhose ikhona, isikhafu, i-shawl enhle. Kakade isixuku sayo yonke into engadingeki ku-dacha yami. Noma kunjalo kunezithombe, ngoba mina, eqinisweni, ungazilahli. Kodwa yilokho konke (Kubonisa eziningi ze-trinkets) kunikezwa. Konke lo Khokhloma, okwakusenziwa njengesipho, lapho sidutshulwa eSuzdal. Yiqiniso, kuhle, kepha ukuyibeka kuphi? Kodwa lokhu kubonisa uthando oluthandwayo! Ingabe ucabanga ngempela ukuthi angikuqondi lokhu? Futhi angikwazi ukulahla isipho, ikakhulu uma ngibona isizukulwane sami esikucela. Ngisitshele uSergei Mikhailovich Mironov: "Nginike imizuzu emihlanu ukutshela umengameli. Futhi bheka - konke kuzophendulela. Ngeke akuzwe lokhu kunoma ubani. "
Bathi kimi: "Wenza kanjalo! Akekho oshilo lokho. " Ngiphendula: "Kungani ungasho? Awuboni ukuthi kwenzekani nxazonke lapha? "Ngabona lapha ukuthi umuntu osekhulile wayekhetha ukudla esitolo futhi wayebuza:" Futhi lokhu kungakanani? Futhi lokhu? "Kwase kusele kakade ukuthatha amanzi. Ngathenga iphakheji lobisi ngimnika lona: "Thatha." - "Ungubani?" Washiya esitolo, futhi ngabuyela ekhaya ngakhala: Ngingabhekana kanjani na? Kodwa ngakwenza ngokudideka. Usadingeka ukuthi uhlole ukuthi wenzani, futhi uma unesihluku, unikeze ngqo ekhaleni lakho. Futhi uzoba nomphefumulo omuhle. Kodwa lapho ngiphazamiseka kakhulu ... Ngingacabanga ukuthi ngamcasula kanjani. Kodwa akulona mina! Lesi simo! Futhi kukhona abantu abangenampofu abahlezi lapho. Futhi abondliwe kahle ngeke baqonde lokhu futhi ngeke bacabange ukuthi umuntu ulambile. Ngahamba ngibona ubaba, ngathi: "Baba, ngizokwenzenjani? Ngithukuthele kakhulu kulo lonke leli cala, ama-noodle, awakhona, ajwayelekile, aphangwa, ahlazisa abantu asebekhulile, ngenxa yokuthi ahlalaphi emhlabathini. " Ungaphila emva kwalokho? Kodwa ngangiyinkimbinkimbi futhi ngimpi kusukela ebuntwaneni. Ngangiyisosha. Futhi manje ngilwa. Ayaziwa nobani, kepha nginzima. Angikaze ngihlale ngithule, ngiphakamisa njalo ubulungiswa. Futhi akekho ongangivimbela le ndlela. Ngisho nalapho bengimemeza kuthelevishini, engikuzondayo, ngikhuluma ngalokho engikubonayo.
Uyazonda ithelevishini? Kungani?
Ngoba ngicabanga ukuthi lena yinkampani yenkohlakalo kakhulu. Okungcono kakhulu! Ngeke bakwazi ukungena zombie mina, kodwa wena, omncane ... Silahlekelwe isizukulwane esisodwa, futhi sizolahlekelwa ngaphezulu. Kodwa njengoba imbongi ethile yathi, "iRussia izothola okwedlule ukuba ibe yilokho esasithandayo kusukela ezincwadini, lapho abantu bekhula khona njengalabo ababulewe." Ngeke ngithole lesi sikhathi, futhi wena, mhlawumbe, uzothola. Ngakho anginayo imizwelo enjalo ye-iridescent: i-anniversary, ake manje ngizisho yonke into, anginayo injabulo. Ngiyabona, ngiyazi lesi sizukulwane. Lowo owadala izindinganiso zempahla. Abantu ababuyisela ingxenye yesizwe emva kwempi, babuyisela ukukhiqiza, ezolimo, abangenakukwenza manje. Amadolobha awakhiwe kabusha futhi alindele ukuba abongwe ngokuthi ... Abaqondisi nababukeli bakuhlola njengomculi ophakeme kakhulu. Futhi emashumini ayisishiyagalombili nanhlanu usebenza ngokusemthethweni. Futhi akuzona ngisho nabalingisi abancane abangaziqhayisa. Ngokuvamile ngeke ngihoxise noma yini, ngoba manje sengisetshenzisiwe!
Isonto lonke lalidubula amahora ayishumi nambili, kwaze kwaba ngehora lesithathu noma lesine ekuseni. Anginayo amandla kakade. Ngifikile izolo ukudubula, kodwa angikwazi ukuphuma emotweni. Ngomshayeli ngithi: "U-Alexander Vladimirovich, ungikhiphe." Waqala ukungisiza, futhi ngalesi sikhathi abanye abantu bangihlasele. Ngabuza umkhiqizi: "Ubani owayengidubula? Ngitshele ukuthi ngingalindeli ukwenza lokhu. Awukwazi ukubonisa umlingisi kuleli fomu. " I-validol ibeka ngaphansi kolimi, futhi iyangihamba! Bese bayobhala: "UDrakunk Markova uphuma." Noma kukhishwe. Yebo, noma yini ongayibhala. Ngifunde kakade konke mayelana nami. Kwabonakala kimi ukuthi ungomunye wabadlali abambalwa abangenzi amanga. Manje sengiboniswe iphephandaba lapho umlomo wami ubheke kimi ngezindlela ezihlukene, iminwe yami isontekile, futhi ngezansi isignesha: "Umkhulu Rimma uthukuthele." Futhi esinye isithombe: eduze komqondisi uMerezhko uyintombazane enombala. Futhi kukhona ukuphawula: "Umkhulu uMarkova ufuna ukushada noMerezhko. UMarkov akajabuli ngalokhu. " Futhi nginomzukulu oyedwa, akekho umzukulu! Futhi kuthiwa le blonde iyabuzwa ngathi, futhi uyaphendula: "Ugogo wangifundisa ukucula nokudansa." Awu, yiziphi izinto ezingenangqondo? Ngingumabhalerina? Futhi yini okufanele uyenze nezintatheli ezinjalo? Futhi bangaki u-Nonka abahluphekile konke lokhu, bangamlethi uNkulunkulu. Kuye kwakunakekelwa okunjalo ... Muva nje kimi uye wabiza: "Rimma Vasilevna, manje senza uhlelo mayelana Nonna Viktorovna Mordjukovoj. Awukwazi yini ukusitshela ngakho? Wena ubungabangane. " Ngithi: "Yebo, babengabangane. Iminyaka engamashumi amane. Futhi ngiyazi konke kusuka nokuya. Kodwa ufuna ukuthi ngikutshele ezinye izinto engingasoze ngakutshela, ngoba nguMordyukova, hhayi iTyutkin. Uyathandwa izigidi. " Ngangifuna ngisho nokuphenya ngephephandaba elilodwa. U-Nonka wayesezizwa embi, endaweni ethile waphuma, futhi wagula, futhi waqala ukuzitholela imithi engilazini. Futhi omunye umthwebuli wezithombe, umbelethi, wambiza, wambuka, wabe esithombeni. Kwabe sekushicilelwa. Ngakho ngashayipha ucingo leli phephandaba, ngicela umhleli futhi ngimbuza: "Unayo izingane? Awusabi ukuthi uzolikhokhela? Wazama kanjani ukususa uMormyukov kanjalo? Futhi wazama kanjani ukuyinyathelisa? "Ngicabanga ukuthi izenzo ezinjalo zibuyiselwa yi-boomerang. Futhi uma lokhu kwenzeka ngemuva kwesikhathi eside, khona-ke imiphumela yabo, ukubonakaliswa kungase kubonakale kungenangqondo futhi kungaqondakali ...
Kodwa ngokujwayelekile uyakholelwa yini emlandweni?
Angikholelwa ekufundisweni kwami, kepha ngenye indlela ngiyaqiniseka. Sonke singakholelwa kuNkulunkulu, ngoba sikhuliswe kanje, kodwa ngikholelwa ukuthi kukhona okusilawulayo. Noma kunjalo, ngisizwa kakhulu ngento ethile. Manje senginomsebenzi esithombeni esisha. Ngesikhathi sami sokudlala enye yezindima eziyinhloko, futhi indima ethandekayo - lesi isipho esinjalo! Phela, akekho owaziyo ukuthi ngiyadutshulwa, nakuba ngidlala indima yonke, kusele izinsuku ezintathu kuphela. Futhi wadlala emndenini, ngenxa yokungabi nesikhathi. Kodwa, yiqiniso, angazi ukuthi lokhu kuzosebenza kanjani njengomphumela. Esikhathini se-cinema, kunzima kakhulu ukubikezela umphumela. Futhi ngezinye izikhathi kunezimo ezimangalisayo kakhulu. Kwenzeka kanjani ukuthi lapho uqoshwa ku-Night Watch movie, wawungazi ukuthi i-heroine yakho ingumlumbi? Bonke abalingisi, abadubula ngisho nendima encane, bafunde ngempela iskripthi. Futhi lena okokuqala ngqá empilweni yami angizange ngifunde script. Ngaphambi kwami, le ndima yanikezelwa kubadlali bezenzo ezinhle, futhi bayenqaba. Ngakho-ke, lapho indima inikezwa kimi, khona-ke bayikwenza ngokuqhosha. Bathi: "Asikwazi ukuthumela le script. I-Khabensky ishiya i-Cannes, sinezinsuku ezine kuphela, sidinga ukudubula konke ngokuphuthumayo. " Futhi bangithumelela umbhalo wami kuphela. Ngibukeka - futhi kukhona ukukhwabanisa. Lapha uyakhala: kukhona uhlobo oluthile lwotshani, ngidinga ukukhulisa indodakazi ... Bengingazi ukuthi indodakazi iyisicabucabu. Futhi-ke ngibheka ifilimu - futhi heroine yami akuyona inkohliso, kodwa uloyi. Kwakungesabi yini uma bethola? Abadlali abaningi bezinkolelo-ze besaba ukudlala izindima ezinjalo. Ngangesaba kakhulu ngaso sonke isikhathi, ngakho ngahlupheka! Ngacabanga ukuthi: "Ngenzeni?" Ngaphambi kwalokho, nginikezwa indima lapho ngifika khona futhi ngilale ebhokisini. Lokhu kungukuthi, ungafa, kodwa ungaqambi amanga ebhokisini. Futhi ngathi angiyikuhoxisa. Ngabe ngidlala inkohlakalo! Ngakho-ke, ngase ngiphelelwe yithemba. Ngabe ngagula, ngacabanga ukuthi: "UNkulunkulu ujezisa". Kodwa bengingazi ukuthi ubani omele adlale ngenxa yalokho, ngakho-ke konke kwenzeka. Ngoba umfowethu, uLeonid, akazange. Wadlala uSathane wafa ngemva kwenyanga. Ake sibuyele emsebenzini wakho. Unezimo eziningana ezintsha, manje kukhona izithombe zokudubula.
Ingabe lokhu akusiyo injabulo yomdlali we-actress?
Ngomdlali wesonto lami, akusiyo leyo njabulo, kodwa isipho kukho konke ukuhlupheka, kuzo zonke izinkinga. Kwakukhona izikhathi lapho ngase ngiseduze nokuphelisa impilo yami. Kodwa ngiphupha, ngifuna futhi ngiba ngumdlali wezandla, kungakhathaliseki ukuthi yini. Ngikholelwa, lokho engangitholanga amantongomane, ngafika eMoscow futhi ngihlala esiteshini. Kuphelele. Futhi uhlelo lwekhadi, lapho kungekho lutho lokudla. Futhi kwakungekho lutho okufanele ukugqoke, futhi kwakungekho lutho, futhi akukho namathemba. Ngafunda kule studio, nganginengubo eyodwa kuphela. Futhi izicathulo zazingekho. Futhi lapho ubheka nxazonke ... Lapha siyahamba ngokudubula endlini yezwe, cishe esigodlweni. Ngakho kukhona echibini ubukhulu obuseduze nenkundla yebhola. Ucabanga ukuthi kulungile ukubona lokhu? Indlela abantu abahlala ngayo! Yebo, basibheka njengezinkomo, ngiyaqiniseka. Sasivame ukubiza laba bantu abantu abahlambalaza, abacabangi, abakwa-scammers, amasela. Futhi manje bakhuluma ngabo: i-oligarch. Ngisanda kuphuma endaweni yesehlakalo ... Kwakukhona umhlangano futhi behlezi - izihlathi ezise ngemuva zazivele zibonakala. Ngithi: "Labafana, babambe - bahlanganyele. Ngoba kuyoba kubi. Hhayi wena, kodwa izingane zakho. Naphezu kocingo lwamamitha amahlanu, izinja nokuphepha. " Ucabanga ukuthi zingaki izinkulungwane zamadoda aseMoscow kuphela abasebenza njengabalindi. Ubani abaqapha? Futhi kusuka kuye? Kunomlindi eNdlovukazi. Futhi ungubani? Montserrat Caballe? Kulabo namuhla ababizwa ngokuthi izinkanyezi, abaningi banesimo sengqondo esingaqondakali. Kodwa phakathi kwabo, ngokuqinisekile, kukhona ozakwabo ozithandayo. Ngeke ngitshele ukuthi yibaphi abadlali engibajabulelayo. Kungani? Yini engalungile ngokusho igama lomculi oyithandayo? Kukhona abalingisi engiyithandayo, futhi kukhona abalingisi engingathandi. Abadlali bayamangalisa, kodwa angithandi. Sinomthetho onjalo, kubadlali abakhulu: uma ubukela ukusebenza, noma ngabe ungajwayele abadlali, qiniseka ukuthi uya emuva ukuze uthi: "Ngiyabonga kakhulu, ngikujabulele." Ngoba bayothi: UPetrenco weza lapha, isibonelo, futhi ubheka ukudlala. Futhi umlingisi manje ulindele kuye. Futhi ngakho mina noSalalsky sahamba ukubona umsebenzi owodwa. Okungakhathazeki. Angizange ngikuthande ngamandla. U-Sadalsky uthi: "Woza, ake sibuyele emuva." Ngithi: "Angikwazi." Angikwazi ngisho ukubonga, ngoba ngangingakwazi ukuma ukusebenza, nakuba abaculi badlala kakhulu. Futhi le Sadastky umfundisi wesilisa waya kubadlali, futhi babuza: "Kungani uwedwa? Futhi kungani uMarkova engazange afike? "-" Wayengawuthandi ngamandla. " Awusho lutho?
Cha, washo ngenjabulo. Nakuba ngiyaqiniseka ukuthi akayithandi nayo. Ngemva kwesikhashana ngiza enkundleni yemidlalo ukubona i-Artsybashev "Umshado". Futhi unendlela yokuphazamisa ukumema abadlali be-backstage. Futhi kukhona uWulf owayengumuntu, lo mdlali, engangikuthandi okuningi. Futhi manje sihlala, siphuza itiye, sikhuluma. Futhi ngezinye izikhathi uthi kimi: "Ngiyakhumbula ukuthi usho kanjani ..." Angizange ngibe nempendulo. Yebo, ngingathini? Yebo, awungithandi? Angikwazi ukuqeda umuntu. Akangakhathaleli umbono wami, ngiyaqiniseka. Kodwa uyangizonda kusukela ngaleso sikhathi, nakuba sekudlule iminyaka eminingi. Yonke impendulo. Abantu bavame ukuphutha futhi bephutha. Wake waba neziphambeko ezinkulu ekuphileni kwakho? Yiqiniso, ubani ongazange azibophe? Futhi ngenza. Ngake ngibamba ama-ruble ayikhulu. Ngabe sengibakhipha, kodwa ngiyabe! Kungani-angiyikutshela, kuyindaba ende. Kodwa isimo sasiyingozi, ngakhala ngenyanga, futhi lowo engimtshontsha imali esitolo sokudlela wathatha isidlo sasemini wangifaka. Wangihlambalaza wathi: "Wena udidekile! Kungani wathatha ama-ruble ayikhulu? Uma ukweba - ngakho-ke isigidi. " Nganginomculi ojwayele, wangibiza, nami ngilila. Uthi: "Kuyini?" - "U-Arkash, ngimbile imali." Umzalwane weza kimi wathi: "Ungakwenza kanjani lokhu? Unendodakazi, uyomfundisa kanjani? "Abantu abaningi beza kimi ngaleso sikhathi, ngoba ngangifuna ukuzibulala. Ngingakwenza kanjani lokhu? Futhi konke ngoba lo mfana waphakamisa lesi sofa wangibonisa ukuthi yini engaphansi kwalo. Futhi kwakunezinqwaba zemali. Futhi enye yayinezintambo. Lapha ngivela kuye futhi ngathatha ama-ruble ayikhulu ... Ngakho-ke, ngokuqinisekile uthi: ungalahli lutho. Bengingabangane nomndeni womculi omkhulu uMikhail Mikhailovich Sadovsky. Futhi ngiyakhumbula ukuthi wamukelani umholo, kanti othile ovela ekhaya wakubeka endaweni evelele. Wathi: "Thatha, ungabathukutheli abantu. Ungangabi namahloni: uSathane uzonyathela emgqeni, futhi lo muntu, ngokungazi, uzothatha omunye umuntu futhi uzoziqalekisa impilo yakhe yonke. " Futhi nganginamahloni futhi nginamahloni ngezenzo zami kuze kube manje. Ngabe senginezimpawu ezimbi kangaka. Kukhona ezinye izimo engingakhumbuli manje, kepha ngiyakhumbula lokhu konke ukuphila kwami, nakuba kungadluli iminyaka eyishumi. Ingabe uyazisola noma yini empilweni yakho?
Ngiyazisola ngokuthi nginezingane ezimbalwa, ukuthi kukhona indodakazi eyodwa kuphela. Kodwa ngikholelwa ukuthi abadlali abanalo ilungelo lokuba nezingane. Umsebenzi wethu ukutheleleka okunjalo! Ngoba umlingisi wangempela uqedwe ngokuphelele ekuphileni. Futhi ungenzi lokhu. Izingane zibaluleke kakhulu kunokuthi, noma yini. Ngazala indodakazi, futhi kwakungekho isikhathi sokwenza, futhi angizange ngimenzele lokho engangizokwenza, angizange nginikeze okuningi. Futhi bangaki abantwana abenza lokho! Lezi yizinto zokuphila ezinomzimba. Futhi umshado wami. Konke kwakuyi-poboku, ngoba into esemqoka isebenza. Futhi uma wawunethuba lokushintsha okuthile empilweni yakho, yini ongayishintsha? Ngingeke ngishintshe usuku olulodwa. Ngingaba ngumdlali we-actress. Angifuni lutho, futhi akukho lutho olungithandayo.
Umlingisi odumile uNonna Grishaeva
UVika Daineko: "Angikaze ngenze okubi kubantu ..."
Ukuphila komuntu siqu ka-Masha Malinovskaya
Inkanyezi yochungechunge lwe-TV uTim Roth
Ushizi unamathele ku-batter
Lin in cream ukhilimu omuncu
Inkukhu emanzini e-microwave
I-Halibut in foil
Khetha umlingani ngesignali yakhe yezinkanyezi
Sihalalisela kakhulu ngoSeptemba 1 evesini nase-prose
Siyakuhalalisela ngoSuku lwePolisi ngamazwi ku-prose, izithombe nama-quatrains amahle we-sms. Ukuthokoza ngokusemthethweni ngosuku loMphathi wezangaphakathi ezivela kuMqondisi
I-Venison ku-sauce ye-cowberry
Ukuxoshwa emsebenzini ngendlela enokuthula
Bilberry Cake Recipe nge Muscat